လောကဓမ္မ နဲ့​သွေဖယ်​သူများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Poetry » ​​လောကဓမ္မ နဲ့​သွေဖယ်​သူများ	7
Posted by naywoon ni on Apr 9, 2015 in Poetry |7comments
နင်းဖို့ စိတ်​မကူးဘူး ။
​တောအရိုင်းပန်းမှ ပန်​ခဲ့သူ ။
ခင်​ဗျား​ကော ကျုပ်​​ကော အပါအ၀င်​ ။ ​နေ၀န်းနီ
Alinn Z says: အခုတလော ကြမ်းလိုက်တဲ့ဘဝ
ကုတင်ပေါ်မှာ အိပ်နေရင် အောက်မှာ တယောက်ယောက်
ရှိနေသလိုလို အဲ့ဒါနဲ့ ကုတင်အောက် ဝင် အိပ်တာ
အဲ့ကျတော့လည်း ကုတင်ပေါ် တယောက်ယောက် ရောက်နေသလိုလို
naywoon ni says: ကြိုက်​ရင်​ ၀ယ်​သိမ်းထားပါ့လားဟင်​ ဒီမှာ ဘီယာဘိုးမချိရို့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12186
Alinn Z says: အိုးးးးး ဝယ်စရာလားဗျ…. အနုပညာလက်ရာဆိုတာ ငွေကြေးနဲ့ တန်ဖိုးမဖြတ်စကောင်းဘူး။
ဒီအတိုင်း ကော်ပီယူ သိမ်းထားလိုက်တယ်.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14466
kai says: လူ
Mike says: .ကဗျာလေးကိုကြိုက်၏ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: လမ်း
. လျှောက် မရ အောင် ပိတ်ထားတယ်။
နမ်းမရ အောင် ကာ ထား တယ်။
နင်း မရ အောင် ခင်း ထားတယ်။
uncle gyi says: လူ့သဘာဝကလွယ်တာကိုမကြိုက်လို့လေကိုနီရဲ့